YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, March 24
24 March 2010 ဒိုင်ယာရီ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/24/20100အကြံပြုခြင်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီဟာ မကြုံစဖူးစမ်းသပ်မှုတရပ်ကို ဖြတ်သန်းနေရပါတယ်။ ဒါကို ကျန်တဲ့မိတ်ဖက်ပါတီတွေက သံယောဇဉ်ကြီးစွာနဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း တခြားပါတီအတွင်းရေးကို ဝင်မပြောသင့်တာမို့ နှုတ်ကိုတင်းတင်းစေ့ပြီး အကောင်းဆုံးအဖြေထွက်လာပါစေလို့ပဲ အောက်မေ့နေကြပါတယ်။
http://ifile.it/owr1lmiFBF to NLD (24.3.2010)
(၁၅) ကြိမ်မြောက် မဟာဗျူဟာညှိနုိူင်းဆွေးနွေးပွဲ၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
http://ifile.it/832v7a4SCM Stmt Bur
ဘီဘီစီ ၂၃ ညနေပိုင်း အသံလွှင့်ချက်မှ
ဘီဘီစီ ၂၃၊ ၃၊ ၂၀၁၀ ညပိုင်း မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်မှ
အသံလွှင့်ချက် ကဏ္ဍတခုကို စာဖြင့်ပြန်လည်းရေးသားပြီး
ဦးခင်မောင်ဆွေ (သို့မဟုတ်) “ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးအယူအဆ” ပြတ်ပြတ်သားသားဆန့်ကျင်ကြ
ဦးခင်မောင်ဆွေ (သို့မဟုတ်) “ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးအယူအဆ”
၂၀၁၀ မတ် ၂၂
မတ်လ(၂၀) ရက် ညနေပိုင်း (အာအက်ဖ်အေ) သတင်းဌာနကနေတဆင့် သူ၏ “ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးအယူအဆ”ကို ဗြောင် ထုတ်ပြောသွားတာအားလုံးကြားသိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ယခုတုန့်ပြန်ချက်ကိုအားလုံးထဲကတာဝန်သိသူတဦးမှ ကနဦးတုန့်ပြန်လိုက်တာလို့သာသဘောထားစေချင်ပါတယ်။ အခြားသော တာဝန်သိသူများကလည်း သက်ဆိုင်ရာရှုဒေါင့်အသီးသီးကနေ တုန့်ပြန်ကြပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်မယ်လို့ ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးပြီဆိုလျှင် ပထမဦးစွာလုပ်ရမယ့်အလုပ်မှာ “အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ မူလရပ်တည်ချက်များ” ကို စွန့်လွှတ်ပစ်ပယ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
သို့မှသာ (နအဖ) စစ်ကောင်စီ၏ ဥပဒေအမှတ် (၂/၂၀၁၀) နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ် အဖြစ်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ “ရော့နဂါး ရော့ပတ္တမြား”ဆိုသလိုပင်။ တနည်းအားဖြင့် ဗိုလ်သန်းရွှေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြော သည့် စကားလိုပင် “ပိတ် ၄ပိတ်ကို စွန့်လွှတ်ကြောင်းအရင်ဆုံးကြေညာမှတွေ့ဆုံမည်” ဆိုသည့်စကားအတိုင်းပင်။
မှတ်ပုံတင်ရေးအယူအဆရှိတယ်/ပါတီမှတ်ပုံတင်မယ်လို့ ဦးခင်မောင်ဆွေက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောနေလေတော့ “အဖွဲ့ချုပ်၏ မူလ ရပ်တည်ချက်များ”ကို စွန့်လွှတ်ပစ်ပယ်ထားလိုက်ပြီဆိုတာကိုလည်း သူ့ရဲ (အာအက်ဖ်အေ) နဲ့အင်တာဗျူးကိုနားထောင်လိုက်သူတိုင်း ရှင်း ရှင်းလင်းလင်းသိမြင်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
သူ့အယူအဆက “နိုင်ငံရေးရှိတာမရှိတာထက် ပါတီမှတ်ပုံတင်နိုင်ရေးသာအဓိက” ဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် “ပါတီမရှိလည်းနိုင်ငံရေးရှိနေဖို့ကအရေးကြီးတယ်”လို့ဆိုတဲ့ ဦးဝင်းတင်၏ အယူအဆနဲ့ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆန့်ကျင်နေပါ တယ်။ “ပြဒါး တစ်လမ်း သံတစ်လမ်း”။
၁၉၈၈ကနေ့ယနေ့အထိအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တရားဝင်တည်ရှိနေခဲ့တာပဲမဟုတ်ပါလား။ လူထုကိုဘာတွေစည်းရုံးခဲ့သလဲ။ ဘယ်နေရာတွေမှာရှေ့ဆောင်ခဲ့သလဲ။
အဖွဲ့ချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဆောင်တဲ့ယာဉ်တန်းကို ဒီပဲယင်းမှာ အကြမ်းဖက်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစား တဲ့ ကိစ္စကိုထက်ထက်သန်သန်အရေးယူဆောင်ရွက်တာရှိခဲ့ပါသလား။
မန္တလေးမြို့၊ ထွန်တုံးရပ်က ကိုရွှေမောင်ဆိုသူ အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ခမောက်ကြီးသွန်းလုပ်ပြီး ရန်ကုန်သယ်မယ်လုပ်တော့ အတွင်းရေးမှူးဦးလွင်ကဘယ်လိုထွက်ပြောခဲ့ပါသလဲ။
အခုလတ်တလော ရန်ကုန်တိုင်းထဲကစက်မှုဇုံတွေမှာ အလုပ်သမားတွေ လုပ်ခတိုးမြှင့်ပေးရေး၊ အလုပ်ခွင်သာယာရေး တောင်းဆို ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပေမယ့် အဖွဲ့ချုပ်က ဘယ်လိုအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပြုခဲ့ပါသလဲ။ လယ်သမားတွေလယ်သိမ်းခံရတဲ့ကိစ္စ၊ ကလေး စစ်သားအဓမ္မစုဆောင်းနေမှု စတဲ့ကိစ္စတွေမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တရားဝင်တည်ရှိနေပေမယ့် ဘယ်လိုအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမျှ မလုပ်ခဲ့နိုင်ပါဘူး။
အဲသလိုလူထုရေးရာတွေတော့ မလုပ်ဖြစ်လို့ မလုပ်ဝံ့လို့မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးပဲထားပါတော့။
၂၀၀၃ မေ၊ ဒီပဲယင်းအကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်လုပ်ကြံရေးလှုပ်ရှားမှုပြီးကတည်းကစလို့ ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ဒီချုပ် မြို့နယ်ရုံးတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရေးနဲ့ အဖွဲ့ချုပ်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကစွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါသလား။ ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၂၀) ကျော်က သွက်သွက်ကြီးခေါင်းရမ်းပြနေခဲ့ပါတယ်။
(နဝတ-နအဖ) စစ်အစိုးရကဘက်ပေါင်းစုံကနေ ညစ်ပတ်ဖိနှိပ်နေတာအမှန်ပါပဲ။
ဒီလိုညစ်ပတ်ဖိနှိပ်မှုတွေကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ခေါင်းငုံ့ခံနေဖို့ တရားဝင်တည်ရှိနေတာမှမဟုတ်တာ။ အဲဒီလိုခေါင်းငုံ့နေရတဲ့ ဖိသမျှနှိပ်သမျှ ခါးစည်းခံနေရတဲ့ ပါတီတရားဝင်တည်ရှိမှုဆိုတာကို ဘာမက်မောနေစရာရှိပါသလဲ။
အခုထုတ်ပြန်ထားတဲ့ “နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ”ဆိုတာက အဲသလို နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်ခါးစည်းခံလာရတဲ့ ဘဝထက်ပိုဆိုးမယ့်တရားဝင်တည်ရှိမှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သက်ဆိုင်ရာပါတီဝင်ကိုပင် သက်ဆိုင်ရာပါတီက သတ်မှတ်ရွေးချယ်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အပြင် မှတ်ပုံတင်ရေးကော်မရှင်က မထင်ရင် မထင်သလိုအမ်ိန့်ပေးညွှန်ကြားလာတဲ့အခါညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမှာပါ။
မဆောင်ရွက်လျှင် အဲဒီပါတီရဲ့တည်ရှိမှု မှတ်ပုံတင်ထားမှုကို ကော်မရှင်ကဖျက်သိမ်းနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
မှားနေတာကို မှားနေကြောင်း/ မတရားတာကို မတရားတဲ့အကြောင်း/အတင်းအဓမ္မအနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်တာကို အတင်းအဓမ္မ အနိုင် ကျင့်ဖိနှိပ်နေကြောင်း ပြည်သူတွေသိရှိလာအောင်ဖေါ်ထုတ်ဖွင့်ချရမယ်။ ပြည်သူတွေပါဝင်လာအောင်လှုံ့ဆော်စည်းရုံးရမယ်။ ဒီလိုတိုက်ပွဲ ဆင်ဖို့တည်ရှိနေတာပါ။
ဒီလိုဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကသိအောင် မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုရမယ်။ မီဒီယာတွေကမေး လိုက် တိုင်း“ရှိပါတယ်/ အန်ကယ်တို့အခုချိန်မှာ ထုတ်ဖေါ်မပြောဆိုနိုင်သေးပါဘူး” ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားပါတယ်။ အခုတော့သိပ်ကို အချိန်နှောင်းနေပါပြီ။
ထုတ်ဖေါ်ပြောသင့်တာတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောရမယ့်အချိန်မှာလူထုတစ်မျက်နှာထဲကိုကြည့်ပြီးပြောကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မပြော ပဲနေတာ။ မပြောရဲတာဟာ လူထုအကျိုးကို ပစ်ပယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
(နအဖ) စစ်အစိုးရ “နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိဘူး” ဆိုပြီး ဗြောင်လိမ်ပါတယ်။
“နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရှိနေကြောင်းလှုပ်ရှားမှု”ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ရှေ့ဦးဆောင်ပြီး ဘာကြောင့်တိုက်ပွဲမဆင် တာလဲ။ဆင်ဖြူမျက်နှာဆင်မည်းမကြည့်ဝံ့သလို(နအဖ)စစ်အစိုးရငြိုငြင်မှာကိုကြောက်နေပါသလား။ “ကြောက်ရခြင်းမှလွတ်ကင်းရေး” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ဒီချုပ်ခေါင်းဆောင်စုကပြန်လေ့လာကြရမယ်ထင်ပါတယ်။
အခုတော့ ကိုယ်ထွေးပြီးသားတံတွေးကို ကိုယ်ပြန်မျိုနေတဲ့ဘဝရောက်နေပါတယ်။
လူတိုင်းမြင်လူတိုင်းသိတဲ့ ထူးခြားချက်တစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကျဉ်းကျနေစဉ်ဆိုလျှင် ဒီချုပ် ခေါင်း ဆောင်စုဟာ (နဝတ-နအဖ) စစ်အစိုးရဖိအားပေးအကြပ်ကိုင်လာမှုတွေကို ငြင်းပယ်နိုင်စွမ်းမရှိပဲ (နဝတ-နအဖ) စစ်အစိုးရတီးပေးတဲ့ ဆိုင်း ချက်နဲ့အညီလိုက်ကတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။
လွှတ်တော်ခေါ်ပေးဖို့တောင်းတာဖြစ်လို့တကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်အဆုံးမှာ ဒီချုပ်ခေါင်း ဆောင်စုဟာကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဂန္ဒီကြေညာချက်အတိုင်းမရပ်တည်ခဲ့ပါဘူး။
(နဝတ) စစ်အစိုးရရဲ့ (၁/၉၀) ကို အလျော့ပေးကာ လိုက်နာပါမယ်လို့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကျိုက္ကဆံ အမျိုးသားညီလာခံတက်တဲ့ဘဝဆိုက်ရောက်ရတာပါပဲ။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေဟာ ဦးတင်ဦး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ဦးဝင်းတင်တို့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခံနေရစဉ် ကာလတွေမှာဖြစ်ခဲ့တာတွေပါ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကျိုက္ကဆံအမျိုးသားညီလာခံထဲထွက်လာတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရာကနေ လွတ်မြောက်လာပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။
ဂန္ဒီကြေညာချက်ထုတ်ပြန်စဉ်ကလည်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မူအတိုင်း၊ သဘောထားအတိုင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မရပ်တည် ခဲ့ပါဘူး။ (နဝတ) စစ်အစိုးရ ဖိအားပေးတာကို မလွန်ဆန်ဝံ့ခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုမရပ်တည်ဝံ့တာဟာပျော့ပြောင်းမှုမဟုတ်ပါဘူး။ပျော့ညံမှုဖြစ်ပါတယ်။ အလျော့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အရှုံးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အရှုံးပေးမှနှလုံးအေးတယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးမလုပ်ပဲ ရိပ်သာသွားပြီးတရားအားထုတ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။
အခုလည်း ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်အတိုင်းရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပ်တည်ဖို့လိုပါတယ်။
ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိ အီးစီတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေ က ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်နဲ့ ဒီချုပ်မူလရပ်တည်ချက်တွေကို ပစ်ပယ်စွန့် လွှတ်ပြီး “မှတ်ပုံတင်ရေး”ဆော်သြော်နေပါတယ်။
ဒီလိုပြောဆိုနေတာတွေကို အဆင့်ဆင့်သော ဒီချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ဒီလိုယူဆမှုနဲ့တွေးခေါ်လုပ်ဆောင်မှုကို ပြတ်ပြတ် သားသား တိုက်ပွဲဆင်ရပါမယ်။ တိုက်ပွဲမဆင်သူဟာ အလိုတူအလိုပါသဘောထားရှိသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးဆော်သြော်နေတယ်ဆိုတာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းမှုမြောင်းပုပ်ထဲကို ဆွဲ ခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကာယကံမြောက်တွန်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မှတ်ပုံတင်ရေးအတွေးအခေါ်အယူအဆနဲ့ ထိုအယူအဆရှိသူ တွေကို ပြတ်ပြတ်သားသားတိုက်ပွဲဆင်ရပါမယ်။
- (နအဖ) စစ်အစိုးရကို ဒူးထောက်အညံ့ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်။
- ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်နဲ့ ဒီချုပ်မူလရပ်တည်ချက်တွေကို စွန့်လွှတ်ပစ်ပယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။
- ပြည်သူ့လူထုကို ကျောခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။
- (နအဖ) စစ်အစိုးရကို ပြတ်ပြတ်သားသားဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်တာဖြစ်တယ်။
- ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်နဲ့ ဒီချုပ်မူလရပ်တည်ချက်တွေကို ပြတ်ပြတ်သားသားထိန်းသိမ်းကာကွယ်တာဖြစ်တယ်။
- ပြည်သူလူထုကို ရဲရဲကြီးမျက်နှာမူတာဖြစ်တယ်။
နိုင်ငံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဆိုရင် ပြည်သူ့တစ်မျက်နှာပဲအဓိကကြည့်ရမယ်။ မျက်နှာများချင်လို့မရဘူး။ အစိုးရရဲ့ဖိနှိပ်မှုနဲ့ ကောက် ကျစ်ယုတ်မာမှုတွေကို ပြည်သူသို့တင်ပြပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရဲရမယ်။
ဒီလိုမှမဆောင်ရွက်ရဲမဆောင်ရွက်ဝံ့တဲ့ပါတီဟာနိုင်ငံရေးရှိတဲ့ပါတီမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံရေးအသက်ဝိဉာဉ်ကင်းမဲ့နေတဲ့၊ သေနေတဲ့ပါတီ ပဲဖြစ်မယ်။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးအသက်ဝိဉာဉ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ ပါတီတစ်ရပ်အဖြစ်ကျနော်တို့ရပ်တည်မလား။
သို့တည်းမဟုတ် (နအဖ) စစ်အစိုးရတီးလိုက်တဲ့ဆိုင်းချက်နဲ့အညီ ကခုန်နေရတဲ့ အမည်ခံပါတီတစ်ရပ်အဖြစ်ရပ်တည်မလားဆိုတာ မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့မှာ အဖြေပေးရပါလိမ့်မယ်။
ဒိုင်နိုဆောကြီးကဲ့သို့အားကောင်းလှသော NLD ပါတီ
၂၀၁၀ မတ်လ ၂၉ ရက်ကို ဗိုလ်သန်းရွှေကတော့ဒူးနန့်ပြီးစောင့်နေပါပြီ... NLD ပါတီ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာလဲ....ပြည်သူတွေဘာကိုမျှော်လင့်ရမှာလဲ...
လမ်းမတွေထက် အရေးဆိုဖို့ ပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးတွေနဲ့ မောပန်းနေကြပါပြီ....
ပါတီအနေနဲ့ ရွှေဂုံတိုင် ဆုံးဖြတ်ချက် ကိုင်ဆွဲပြီး ရွေးကောက်ပွဲပျက်အောင်ဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်မှာလဲ...
မိမိတစ်ဦးတည်းသဘောမှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လုံးဝ မထောက်ခံ ကန့်ကွက်ပါသည်....သို့သော်......
နာဂစ်အခြေခံ ဥပဒေကို မည်သူတွေ မည်ကဲ့သို့ တားနိူင်ခဲ့သ လဲ......
မိမိကိုယ်တိုင်....မိမိနဲ့ ထပ်တူ .....မလွတ်လပ်တဲ့ပြည်သူတွေ..ကျောင်းသားတွေ....တပ်မတော်သားတွေ...
ဘယ်ပါတီကိုမဲပေးကြရမှာလဲ...ခုထဲကတောကြောင် အေးလွင်တို့...သုဝေ တို့ လက်ခမောင်းခတ်နေကြပြီ....
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် NLD အနေနှင့် ပါတီ၏ တည်ဆဲမူဝါဒ ကို ကိုင်စွဲကာ လုံး ဝ မှတ်ပုံတင်ရန် မသင့်ပါ...
ဒါကြောင့် NLD က လက်ရွေးစင်ခေါင်းဆောင်တွေ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ လူ ခွဲပြီး NLD ကနူတ်ထွက်ကာ ပါတီသစ်ထောင်သင့်ပါပြီ..ပြောင်းလဲခြင်းများနဲ့လိုက်ရွေ့ဖို့အချိန်တန်နေပါပြီ....
အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်ခက်သော်လည်း မလုပ်မဖြစ်လုပ်ရတော့မည့်အခြေအနေရောက်နေပါပြီ...
ယင်းအတွက် NLD နှင့် ပါတီသစ်တို့ အကြား တူညီသော မူဝါဒမှာ ..စု..လွတ် ..တွေ. ...တောင်းဆိုချက်နှင့်အတူ ဘုံရန်သူ နအဖ စနစ် ကို အပြုတ်တိုက်ရန်နှင့်မတူညီသောဝါဒမှာ ရွေးကောက်ပွဲကိုချင်းကပ်ခြင်းသဘောထားသာပင်ဖြစ်ပေမည်...ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယင်းပါတီများ ၏ ခေါင်းဆောင်မျှသာ မဟုတ် လူထုခေါင်းဆောင် လဲ ဖြစ် ရာ ပြည်သူ များ၏ နောက်ဆုံး ထွက်ပေါက်အတွက်ကန့်ကွက်မည်မထင်ပါ...
(၁) ယင်းသည် NLD ပါတီပြိုကွဲခြင်းမဟုတ်ပါ...လိုက်လျောညီထွေပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါသည်...
(၂) NLD သည် နိုင်ငံရေးဂုဏ်သိက္ခာ ဟူသော စကားလုံးထက် ယခုအချိန်တွင် ပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီပွား ဂုဏ်သိက္ခာ ကို ထောက်ထားကာ ဆုံးဖြတ်ခြင်းလဲဖြစ်ပေမည်...ထို့အတွက် ဂုဏ်သိက္ခာ ကျရန် မရှိ .. တက်ရန်သာရှိပေမည်...
(၃) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်...နိူင်ငံရေးခေါင်းဆောင်...တပ်မတော်ဖခင်...သူ. အချိန်ကာလနှင့်သူလိုက်လျောညီထွေ ပြောင်းလဲကာလွတ်လပ်ရေးကိုရယူနိူင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်...နေရာတခုတွင်တွယ်ကပ်မနေခဲ့ပါ...ပါတီ၏ လက်ရုံးအင်အား တချို. စနစ်တကျ ခွဲထုတ်ခြင်းမှာ..လုံးဝ ဖျက်သိမ်းခံရခြင်းထက်သာလွန်ပေလိမ့်မည်...
(၄) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဘာဘဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ် တသံတည်းထွက်ရမည်ဟုပြောထားခြင်းမှာလည်း ....ယခုကဲ့သို့ညီညွတ်သော အစုအဖွဲ့ဖြင့် စနစ်တကျ ခွဲထွက်ပါက ကန့်ကွက်မည်မထင်ပါ....
(၅) နိုင်ငံတကာသိ တဲ့ မြန်မာ့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီ လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်နိူင်ရေး လမ်းစများ ဖော်ဆောင်နိူင်ရန် အချိန်ပိုမို ရပြီး နောင် အချိန်နီးမှ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဖိအားများကြောင့် ကောင်းမွန်သော အပြောင်းအလဲဖြစ်ပါက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်နိူင်ပါသည်...
(၆) NLD ပါတီကို မတရားဥပဒေနှင့်ဖျက်သိမ်းစေကာမူ ဘဘဦးဝင်းတင်ပြောသကဲ့သို့ နိူင်ငံရေး ရှိသရွေ့ NLD ပါတီမပျက်ပါ..
(၇)ညီညွတ်စွာ ခွဲထွက်သောသူများကိုအာဏာရူး န အ ဖ လက်ကိုင်ဒုတ်ဟု မစွပ်စွဲသင့်ပါ....အားလုံးမှာ အစဉ်အလာရှိ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ရှိသူများပင်ဖြစ်ပါသည်...ပြည်တွင်းပြည်ပမှ အားလုံးဝိုင်းရံပေးဖို့လိုအပ်ပါသည်....
(၈)ညီညွတ်စွာခွဲထွက်ခြင်းဖြင့် နိူင်ငံရေး တိုက်ကွက် သစ်များဖြင့် နှစ်ဘက်ညှပ် ကာ ရန်သူကိုအောင်ပွဲဆင်နိူင်ပါသည်...
(၉) သူတို့မတရားဥပဒေနှင့်သူတို့အား ပြန်တိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်....ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်..ယုတ်မာသော စစ်ခွေးများကို ...သူတို့အမြှီးနှင့်သူတို့ ပြန်ချီခြင်း
(၁၀) NLD ဗဟို တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အသီးသီးမှ ရှိရင်းစွဲ အင်အားစုများနှင့် ပြည်သူများပူးပေါင်းသောအင်အားက ....မတရား ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို မဖြစ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရင်း နောက်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့သော် အသင့်ဖွဲ.စည်းထားသော ပါတီသစ်အင်အားဖြင့် တွန်းလှန်ကျော်လွှားနိူင်ပါလိမ့်မည်...
(၁၁) မတရား ရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ်ခဲ့သော် စုစည်းထားသော ထိုပါတီသစ်မှ ၇၅ % မမှန်းနိူင်သော်လည်း ၅၀ % ကျော်သို့ ၆၀ % ကျော် ပြည်သူ့အားနှင့် အောင်နိူင်မည်မှာ အသေအချာပါ...
(၁၂) လက်ရှိ အချိန်တွင်ရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ်ခဲ့သော်ဟူသော အချိန်ထိ သာ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မနက်ဖြန်လွတ်မြောက်မလား ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ လွတ်မြောက်နိူင်မလား ...ဗိုလ်သန်းရွှေ ညစ်ပတ်မြဲညစ်ပတ်ခဲ့သော်ထိုထက်ပိုနိုင် အုံးမလား.....ပြည်သူလူထုကြီး သည်းခံနိူင်မူ အတိုင်းအတာမှသည် ...လူထုအုံကြွ မူ အတိုင်းအတာ...မမျှော်မှန်းနိူင်သော ပြောင်းလဲခြင်းများစွာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသေးသည်.....မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ... ဒိုင်နိုဆောကြီးကဲ့သို့အားကောင်းသော NLD ပါတီ ကို နောင်တစ်ခတ်တွင် နိုင်ငံရေးပြတိုက်တွင်း မကြည့်လိုပါ.....လွှတ်တော်စင်မြင့်ပေါ်တွင် သာကြည့်မြင်လိုလှပါသည်.....
ကျွှန်တော်ဟာ ၈၈၈၈ မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတစ်ဦးပါ ...ဘယ်ပါတီဝင်မှ မဟုတ်ပါ...ကျွှန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောထားကို NLD က ခေါင်းဆောင်များနှင့်ပြည်သူများ သိစေချင်လို့ဝေ မျှတာပါ။
(၁၅) ကြိမ်မြောက် မဟာဗျူဟာညှိနုိူင်းဆွေးနွေးပွဲ၏ သေ...
ဦးခင်မောင်ဆွေ (သို့မဟုတ်) “ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးအယူအဆ...